Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FC Cologne si Nigeria & ụwa | TAA
APC South-South caucus kwadoro Gọvanọ Oshiomhole onye isi oche nke mba
Ndi isi na-ekwusi ike na ndi mmadu no na Naijiria ka ndi mmadu noo na Naijiria ...
Ex-Malawi President Joyce Banda si n'ịbụ onye a dọọrọ n'agha laa
78 gụsịrị akwụkwọ na klas mbụ na Mahadum Maiduguri
Alakụba ahịa nke Naijiria amaliteghachiri na-agbada ala, site na 0.12%
Liverpool bụghị naanị Mohamed Salah - Roma nchịkwa
Atletico Madrid na-azụ azụ Juanfran emewo ka ọ merụọ ahụ
Facebook adabere na mgbasa ozi scammy cryptocurrency
Home Tags FC Cologne
Arsenal nwere ike imeri Manchester City n'ọsọ egwuregwu - Granit Xhaka
Arsenal nwere ike belata ndị isi na ndị isi nke Manchester United, Manchester City, na ihe ịma aka maka aha a, midfielder, Granit Xhaka, kwuru.
Sanchez dị ka ndekọ Kanu na Arsenal
Ihe mgbaru ọsọ mbụ nke Alexis Sanchez maka Arsenal n'oge a na 3-1 meriri FC Cologne na Europa Njikọ, hụrụ na ya sonyere otu ndị na-egwu egwu na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ.
Nchọpụta mgbasa ozi nke Arsenal n'oge ọgba aghara Europa
Arsenal kwuru n'elekere Friday na ha nyochaa uzo otutu ndi mmadu gbagoro na-abanye n'umu ulo nke Emirates Stadium n'ihi nsogbu ha na Cologne, na-ekpochapu ihe ndi ojoo nke meriri nsogbu Europa.
Iwobi nwere obi ụtọ na mmeri Arsenal na Europa League megide Cologne
Edemede Super Eagles, Alex Iwobi, kwupụtara na obi ụtọ ya mgbe Arsenal kwụsịrị na 2017 / 2018 UEFA Europa League Group nke na-eme ka 3-1 merie Bundesliga n'akụkụ FC Cologne na Thursday n'abalị.
Ndị isi obodo South-South nke Congress All Progressives Congress (APC), na Monday kwadoro onye ọchịchị Gọvanọ Edo, bụ Adams Oshiomhole n'oge gara aga, maka ọkwa onyeisi oche nke ndị otu.
Eusebio Di Francesco na Aleksandar Kolarov na-akwado ọnwụ Serie A karịrị Mohamed Salah ichegbu onwe ha mgbe ha na Liverpool na Tuesday.
Ndi isi na-akpo oku oku nke Naijiria site na ndi mmadu bi na South Africa
Onye isi na-enyere ndị isi aka na President na Foreign Affairs na Diaspora, Mrs. Abike Dabiri Erewa, na Monday kọwara ọnwụ nke Clement Nwaogu, onye Naijiria ọzọ nọ na Rustenburg, South Africa, dị ka ihe ọjọọ.
Atletico Madrid kwadoro mmerụ ọhụụ maka Juanfran azụ, na-ahapụ onye nchịkwa Diego Simeone ka ọ ga-abanye na ndị 14 na-eme egwuregwu maka Europa League nke mbụ na Arsenal dịka Diego Costa na-enwe nsogbu nsogbu ahụ.
Onye isi Malawi President Joyce Banda ga-alaghachi na Satọdee mgbe o jiri ihe karịrị afọ atọ na-eburu onwe ya n'agha n'ihi ebubo ebubo, otu ọnụ na-ekwuru maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya kwuru na Monday.
Ndị bi na FCT na-akọwa ezigbo ndị agbata obi dị ka ngwọta maka nchekwa
Ụfọdụ ndị bi na Federal Capital Territory (FCT) na Monday kwusiri okwu ike na ọ dị ha mkpa ịnọgide na-agbachitere agbata obi ha, mgbe ha na-akọwa ezi agbata obi dịka ihe ngwọta maka nchebe.
Cyril Ramaphosa nke South Africa kpachapụrụ obere nlegharị anya UK mgbe mmegharị iwe gasịrị
Onye isi oche Afrika South Africa kpachaala nleta nleta na Britain iji laghachi n'ulo ma na eme ihe ike na isi obodo.
President Erdogan na-eziga Turkey ka ha nyochaa ntuli aka na June 24
President Recep Tayyip Erdogan na Wednesday kpọpụtara ntuli aka na Turkey maka June 24, na-ebute ntuli aka n'ihu ihe karịrị otu afọ na ọkara iji mee ka ọganihu gaa n'ihu usoro nlekọta ọhụrụ.
Pep Guardiola na-egwu ndị Manchester City, ndị ọrụ
Onye na-elekọta Manchester City, Pep Guardiola, gosipụtara obi ekele ya maka ndị na-egwu ya na ndị ọrụ ụlọ ọrụ maka ịgba chaa chaa na Premier League.
HEDA gbara CCB ume ka ọ nyochaa akwụkwọ akụkọ Senator Ekweremadu
Ihe gbasara Human Rights na Environmental Agenda (HEDA Resource Center), ndị na-abụghị ndị ọchịchị na ndị na-abụghị ndị na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadu na njikọta mmepe, rịọrọ ụlọ akwụkwọ Code nke Conduct Bureau (CCB), na-achọ nyocha nke nkwupụta ihe onwunwe nke onye isi oche ndị isi, Senator Ike Ekweremadu.